• Fivoahana avo • asidra firaka
CSPOWER bateria AGM avo lenta: karazana bateria asidra fikojakojana maimaim-poana voaisy tombo-kase manokana izy io, antsoina koa hoe bateria avo lenta avo lenta, mety tsara amin'ny fampiharana voafetra amin'ny habaka izay mitaky hery bebe kokoa noho izay azo aterina amin'ny bateria asidra firaka mahazatra.
CH SERIES HIGH DISCHARGE AGM BATTERY
> Endri-javatra ho an'ny bateria AGM avo lenta
Noho ny endrika manokana sy tsy manam-paharoa, ity fitahirizana herinaratra elektrika ity dia tonga miaraka amin'ny famotsorana avo lenta, hery manokana avo lenta, ary mihoatra ny 20% ny angovo avoakan'ny bateria mahazatra.
Ny bateria indostrialy dia mampiasa firaka tsy manam-paharoa amin'ny harafesina sy vahaolana electrolyte manokana, ka mitazona ny fahombiazan'ny hafanana ambany sy ny fiainana maharitra.
Izy io dia vita amin'ny fitaovana madio tsara, ny bateria AGM lead acid dia saika tsy misy fivoahana.noho izany dia afaka mametraka tahiry maharitra.
Ny bateria avo lenta CSPOWER dia mampiasa teknolojia famerenan'ny entona, ity fitaovana famatsiana herinaratra ity dia mirehareha amin'ny fahombiazan'ny tombo-kase avo indrindra ary tsy miteraka zavona asidra.Noho izany, mitsinjo ny tontolo iainana.
Ny famolavolana rafitra fanatsarana sy ny teknolojia famehezana mandroso dia miantoka ny tombo-kase azo antoka, ary noho izany dia mitondra fiarovana avo ho an'ny mpanjifa.
Ny bateria AGM CSPOWER avo lenta dia safidy tsara indrindra ho an'ny fampiharana mitaky fahaiza-manao kely fa ny fivoahana lehibe toy ny rafitra UPS avo lenta, starter, fitaovana herinaratra, sns.
Ny rafi-pifandraisan-davitra ao anatin'izany ny birao fifanakalozana, ny onjam-peo mikraoba, ny tobin'ny finday, ny foibe data, ny onjam-peo ary ny onjam-peo;
Batterie herinaratra mety ho an'ny fitaovana elektrika, kilalao, mpanangona vovoka entin-tanana ary robot mitantana tsy misy olona;
Rafitra famantarana, rafitra jiro vonjy maika, rafitra fiarovana sy fiarovana;
EPS sy UPS rafitra.
teo aloha: CG Valve Regulated Gel Battery
Manaraka: OPzS Tondra-drano Asidra Asidra
(Ahy) refy (mm) lanja Terminus Bolt
Batterie AGM 6V/12V avo lenta avo lenta
CH12-35W 12 35/15min 8/10HR 151 65 94 100 2.55 F2 /
CH12-55W 12 55/15min 12/10HR 152 99 96 102 3.8 F2 /
CH12-85W 12 85/15min 20/10HR 181 77 167 167 6.5 T1 M5×16
CH12-115W 12 115/15min 28/10HR 165 126 174 174 8.7 T2 M6×16
CH12-145W 12 145/15min 34/10HR 196 130 155 167 11 T3 M6×16
CH12-170W 12 170/15min 42/10HR 197 166 174 174 13.8 T3 M6×16
CH12-300W 12 300/15min 80/10HR 260 169 211 215 25 T3 M6×16
CH12-370W 12 370/15min 95/10HR 307 169 211 215 31 T3 M6×16
CH12-420W 12 420/15min 110/10HR 331 174 214 219 33.2 T4 M8×16
CH12-470W 12 470/15min 135/10HR 407 174 210 233 39 T5 M8×16
CH12-520W 12 520/15min 150/10HR 484 171 241 241 47 T4 M8×16
CH12-680W 12 680/15min 170/10HR 532 206 216 222 58.5 T5 M8×16
CH12-770W 12 770/15min 220/10HR 522 240 219 224 68 T6 M8×16
CH12-800W 12 800/15min 230/10HR 520 269 204 209 70 T6 M8×16
CH12-900W 12 900/15min 255/10HR 520 268 220 225 79 T6 M8×16
CH6-720W 6 720/15min 180/10HR 260 180 247 251 30.8 T5 M8×16
Batterie cellule solaire Batterie tsy misy fikojakojana Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie 12v 7ah azo averina Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro